Izindaba - Ungaqondi izimpawu zokuwasha, ukuwasha izingubo kuba izingubo ezonakele
Zivele kumalebula wezingubo amashumi amane eminyaka, ngalinye likhethwe ngochwepheshe bamazwe omhlaba ngobulula nokucaca kwalo.
Noma kunjalo kubantu abaningi, imiyalo yokugeza ingahle ibhalwe ngesiMartian.
Ngokusho kwe-poll entsha, abantu abayisishiyagalolunye kwabayishumi abakwazi ukuqonda izimpawu ezivamile ezisetshenziswe kumalebula wezingubo. Ngisho nalabo asebewazi kahle umehluko phakathi kovolo nowokugeza okwenziwe ngezinto zokwenziwa bayavuma ukuthi badidekile ngamabhokisi amaningi, izindingilizi neziphambano ezididayo ezisetshenziselwa ukunikeza izeluleko mayelana nokomisa nokukhipha ibala.
Lokhu okutholakele kuvela kwinhlolovo yabantu abangu-2 000 eyenziwe yi-YouGov kaMorphy Richards. Ingxenye eyodwa kwezintathu yabantu okwaxoxwa nabo yathi ababoni nolunye lwezimpawu eziyisithupha ezibonisiwe, kuyilapho okuwukuphela kophawu olwaziwa ngabantu abangaphezu kwesigamu kwakuyinsimbi en ichashazi elilodwa. Cishe amaphesenti angama-70 ayazi ukuthi kusho "insimbi emlilweni omncane". Uphawu olungu-10% kuphela olwalusazi uphawu oluthi “ungomi luhlanzekile”, kanti amaphesenti ayi-12 kuphela ayejwayele i- “drip dry only”.
Yize kube nenguquko kwezocansi, abesifazane basenolwazi kakhulu kunabesilisa. Ukuqwashisa kwakuphezulu kakhulu kwabesifazane abaneminyaka eyi-18 kuya kwengama-29 ubudala — okubaluleke kakhulu kubo ukunakekela izingubo.
UChris Lever, waseMorphy Richards, uthe: “Izimpawu zezingubo zokugqoka ziwulimi oluyingqayizivele, ngokusobala ulimi oluthathwa abantu abambalwa e-UK abazinike isikhathi sokulufunda. "
"Ukufunda izisekelo ezifana nokuthi yisiphi isithonjana esifanekisela ukuwa komile futhi okumele ukuwashwa okujwayelekile kungasiza kakhulu ekutholeni izingubo ezinhle kakhulu."
Abakwa-Home Laundering Consultative Council bathi akumangazi ukuthola ukuthi abantu abajwayelene nabo.
"Kuyadumaza ukuthi kunokushoda kokuqashelwa, kodwa yindaba ephindaphindwa kaningi," kusho okhulumela lolu phiko, u-Adam Mansell. "Siyinhlangano encane futhi asinaso isabelomali esikhulu."